न्यूनतम सुविधाबिना चल्छन् एम्बुलेन्स- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
न्यूनतम सुविधाबिना चल्छन् एम्बुलेन्स
के–के छैन ? -प्राथमिक उपचार सेवा -अक्सिजन र औषधि -मेडिकल एटेन्डेन्ट -फोर ह्विल ड्राइभ -चालकलाई पोसाक
श्रावण १५, २०७५ फातिमा बानु
काठमाडौँ — सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालन नहुँदा एम्बुलेन्स व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले किनेका एम्बुलेन्स प्रशस्त भए पनि नियमअनुरूप सुविधासम्पन्न छैनन् । कति बिग्रिएर थन्किएका छन् ।
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका (२०७३) अनुसार एम्बुलेन्समा आकस्मिक सेवासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भने पनि अधिकांशमा यस्ता सेवा छैनन् । एम्बुलेन्सलाई अस्पताल पुग्नुपूर्वको उपचारस्थल मानिन्छ । सञ्चालित एम्बुलेन्समा न्यूनतम उपचार सेवा नहुँदा बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको विशेषज्ञ बताउँछन् । मापदण्डअनुसार एम्बुलेन्स ‘फोर ह्विल ड्राइभ’ हुनैपर्ने भने तापनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस्तो एम्बुलेन्स नहुँदा दुर्गमका भिराला र असजिला बाटोमा पुग्न सक्दैन र त्यहाँका बिरामी एम्बुलेन्स सेवाबाट वञ्चित छन् । मापदण्डअनुसार उपचार सेवा नहुँदा एम्बुलेन्स र शववाहन उस्तै हुन पुगेको छ ।
निर्देशिकाले एम्बुलेन्सचालकको पोसाक हुनैपर्ने भनेको छ । निर्देशिकामा पोसाक के कस्तो लगाउने भनेर नतोक्दा चालकले पोसाकबिनै एम्बुलेन्स चलाइरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार प्रत्येक अस्पतालमा मेडिकल एटेन्डेन्टसहितको एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भनिए पनि भेरी अञ्चल अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा एम्बुलेन्स नै छैन । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा २ एम्बुलेन्स भए पनि सञ्चालनमा छैनन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङका प्रमुख महेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘डाँडाको बाटामा एम्बुलेन्स उक्लिनै सक्दैन, बिरामी आधा बाटोसम्म बोकेर ल्याउनुपर्छ, आधा बाटो आएपछि मात्रै एम्बुलेन्स चढ्न पाउँछन् ।’ निर्देशिकाअनुसार एम्बुलेन्सलाई क, ख र ग गरी ३ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । ती रातो, पहेँलो र हरियो रङका छन् । सुुविधाका आधारमा वर्ग र रङ छुटयाए पनि सुुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स निकै कम छन् । राजधानीमा ‘क’ वर्गका यस्ता एम्बुलेन्स पाँचवटा मात्रै छन् ।
वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षका इन्चार्ज डा.भोलाराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उपचारको केन्द्र मानिने ठाउँमै सुुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स अपुग छ, दुर्गमका बिरामीले यस्तो एम्बुलेन्स देख्न पनि पाएका छैनन् ।’ राजधानीमै यस्ता एम्बुलेन्स प्रशस्त आवश्यक रहेको उनले बताए । रातो एम्बुलेन्स खासगरी सडक दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते, सुत्केरी र अचेत बिरामीका लागि प्रयोगमा आउँछन् । यस्ता एम्बुलेन्समा विशेषज्ञ डाक्टरसहित भेन्टिलेटर, अक्सिजन, आकस्मिक औषधि हुन्छ । दुर्गमबाट राजधानीका अस्पताल रिफर भएर आउने बिरामी यस्तै स्तरको सेवा नपाउँदा बाटोमै ज्यान गुमाउने गरेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । एम्बुलेन्समा सुविधा नहुँदा बाटोमै सुत्केरी हुने महिला अत्यधिक रक्तश्राप भएर ज्यानै जान सक्ने उनी बताउँछन् ।
महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एम्बुलेन्सबाट आउने ४५ प्रतिशत बिरामी प्राथमिक उपचारबिनै आउने गरेका छन् । अस्पतालका डा.रमेश महर्जन भन्छन्, ‘रूखबाट लडेका बिरामी ज्यादै विजोग अवस्थामा आइपुग्छन् ।’ एम्बुलेन्स चालकलाई प्राथमिक उपचार तालिम दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘ख’ वर्गको पहेँलो एम्बुलेन्स नेपालमा धेरै खपत हुने एम्बुलेन्स हो । यस्ता एम्बुलेन्स पनि न्यून हुँदा बिरामीले भनेको समयमा सेवा पाउँदैनन् । यस्तो एम्बुलेन्समा सरकारीलगायत विभिन्न संस्था, समिति, दाताबाट प्राप्त र क्लबले पनि संञ्चालनमा ल्याएका छन् । गैरसरकारी अधिकांश एम्बुलेन्स मापदण्ड अनुसारका छैनन् । यस्ता एम्बुलेन्समा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी, प्राथमिक उपचार सेवा, अक्सिजन र औषधि हुनुपर्ने भनिए पनि सुविधा भने छैनन् । ‘ग’ वर्गको पहेँलो एम्बुलेन्स विपद्का लागि हो । धेरै पूर्वाधार आवश्यकता नहुने हुँदा यस्ता एम्बुलेन्स बढी छन् । नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका उपाध्यक्ष रञ्जित आचार्य भन्छन्, ‘एम्बुलेन्स धेरै भए पनि सम्पर्क नम्बर धेरै हुँदा यसमा बिरामीको सहज पहुँच छैन, सरकारले सबै एम्बुलेन्सका लागि एउटै सम्पर्क नम्बर तोक्न आवश्यक छ ।’ भूकम्पको समयमा एम्बुलेन्स सेवाको सम्पर्क नम्बरको अलमल भएकै कारण दुर्घटनामा परेकाले सहज उपचार नपाई अगंभंग हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा एम्बुलेन्स निर्यात गर्दा भन्सार शतप्रतिशत छुट पाइने भएकाले एम्बुलेन्सको भित्रिने संख्या बढ्दो छ । निर्यातित एम्बुलेन्समा मापदण्डअनुसार सुविधा राख्न नसक्दा कति त थन्केर बसेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक गुणराज लोहनी भन्छन्, ‘धेरै एम्बुलेन्स भित्र्याउनुभन्दा, भएका एम्बुलेन्सको मर्मतसम्भार र गुणस्तर बनाउन सके हुन्थ्यो ।’
सरकारी निकायले सञ्चालन अनुमति दिएका एम्बुलेन्स मापदण्डअनुसार चले नचलेको अनुगमन गर्ने गरेको छैन । सरकारले नियमन तथा अनुगमनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकेको छ । बजेट र जनशक्ति अभावका कारण निरीक्षण गर्न नसकिएको समितिका कर्मचारी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर अनुमानित १ हजार ४ सय एम्बुलेन्सले सञ्चालन अनूमति पाएका छन् । मन्त्रालयले गत वर्ष पनि थप २ सय १९ एम्बुलेन्सलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । कति नियमित सञ्चालनमा छन् र कति थन्किएका छन्, मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांक छैन । मन्त्रालयले छडे अनुगमन गर्दा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा त्रुटि देखिएको मन्त्रालयमा उपसचिव भगनाथ खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘निर्देशिका कार्यान्वयन अप्ठेरो भइरहेको छ, निर्देशिका नयाँ भएकाले यस्तो समस्या आएको हो।’ नयाँ भित्रन लागेका एम्बुलेन्सको कडाइका साथ गुणस्तर नहेरी भन्सार कट्न नदिने उनले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०८:४३
साइकल क्लबहरू सक्रिय
श्रावण १५, २०७५ प्रशान्त माली
ललितपुर — बुङमतीका अनिल तुलाधारले साइकल कुदाउन थालेको डेढ वर्ष भयो । उनी स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्ने भएकाले अरूलाई पनि साइकल चलाउन सुझाव दिन्छन् । भन्छन्, ‘विदेशमा साइक्लिङ गर्नेलाई उच्च सम्मान छ । नेपालमा भने विपरीत छ ।’ उनले नेपालका अधिकांश जिल्लामा सडक सुविधा नपुगेकाले ग्रामीण र हिमाली पर्यटन विकास गर्न साइकल भरपर्दो विकल्प हो ।’
तुलाधरलाई यात्रामा बुङमतीकै सुनील महर्जन, रवीन्द्र तुलाधार, युकेश बज्राचार्य, विद्या तुलाधर, जमुना बज्राचार्यलगायतले साथ दिने गरेका छन् । उनीहरूले बुङमतीमा साइक्लिङ क्लब नै गठन गरेर प्रत्येक साता यात्रा गर्ने गर्छन् ।
सोसियल टुर्स संस्थाले शनिबार ‘काठमाडौं कोरा २०१८ साइक्लिङ च्यालेन्ज’ आयोजना गर्‍यो । र्‍यालीमा अधिकांश युवा सहभागी थिए । पछिल्लो समय साइक्लिङमा युवा जमातको आकर्षण बढ्दो छ । सोसियल टुर्सले गत वर्ष आयोजना गरेको ‘काठमाडौं कोरा २०१७ साइक्लिङ च्यालेन्ज’ बाट संकलित ५ लाख रुपैयाँ बुङमतीमा साइक्लिङ विकास गर्न दिएको थियो । क्लबले अहिले युवायुवतीलाई साइकलयात्रा गर्न प्रेरित गर्दै आएको छ ।
नक्सालका दिपेश पन्थ दैनिक ८ किलोमिटर सइकलयात्रा गर्छन् । उनले साइकल कुदाउन थालेको ३ वर्ष भयो । भन्छन्, ‘पछिल्लो समय बढी मृत्युका कारण प्रदूषण र सवारी दुर्घटना हुन थालेको तथ्यांक छ । काठमाडौंको सवारी चाप, साघुरा सडकमा साइकल एक मात्र विकल्प हो ।’ उनले साइक्लिङले ट्राफिक जाम, पार्किङ समस्या पनि समाधान हुने बताए । सोसियल टुर्स संस्थाका अनुसार काठमाडौंमा विद्यालयमा विद्याथीहर्रूको क्लबबाहेक २ सयभन्दा बढी साइक्लिङ क्लब गठन भइसकेका छन् ।
उपत्यकामा साइकल पर्यटन ठूलो सम्भावना छ । एकदेखि १२ दिनसम्मको टुर प्याकेज बनाए यात्रामा निस्कन मिल्ने ठाउँ छन् । टुर्सका व्यवस्थापक विपिन महर्जन भन्छन्, ‘शिवपुरी, गोर्कण, गोदावरी, नार्गाजुनजस्ता उत्कृष्ट साइक्लिङ गन्तव्य छन् ।’ ललितपुरको दक्षिण पहाडी भेगमा एकदेखि १२ दिनसम्मको प्याकेज टुर गर्न मिल्ने स्थान छन् । साइक्लिङबाट जंगल सफारी, भारदेउको गुप्तेश्वर गुफा, गिम्दीको चमेरे गुफा, गोटिखेलबाट काभ्रेको पनौती निस्कने महादेव गुफा, गिम्दीको चमेरे गुफा र प्युटारको नागगुफा उत्कृष्ट गन्तव्यस्थल पुग्न सक्ने रुट छन् । बाटोमा मृग, खरायो, कालिज, हरिण, जरायो, मृगजस्ता वन्यजन्तु देख्न सक्ने सम्भावना छ । रुट पहिचान गरेर व्यवस्थित बनाउन सके पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
नेवार समुदायले उपत्यकामा न्हुद या: भिन्तुनाको उपलक्ष्यमा कहिलेकाहीं साइकल र्‍याली गर्ने गरेका छन् । चीन, जर्मनी, डेनमार्कमा साइक्लिङ रुट विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विकसित मुलुकमा विद्यालय जान बालबालिका साइकलको प्रयोग गर्छन् । पुरुषभन्दा महिलाले बढी साइकल चलाउँछन् ।
स्थानीय सरकारले पनि साइक्लिङ प्रवद्र्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने टुर्सको भनाइ छ । नेपालले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साइक्लिङ प्रतियोगिता गर्दै जानुपर्छ । साइक्लिङ सरकारको स्मार्ट सटीको कम्पना पनि साकार पार्न मद्दत गर्ने महर्जन बताउँछन् । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन भन्छन्, ‘अन्य नगरपालिकासँग समन्वय गरेर साइक्लिङ रुट पहिचान गर्ने र परम्परागत धार्मिक रुटलाई साइक्लिङ रुटमा परिर्णत गर्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।’
प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०८:४२